Waa kuma Shaqsiga Abaal marinta Nabada Soomaaliya ee Cafis Award ku guulaystay C/qaadir Ibraahim Gacal Abkow! – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Tuuryare 27 March 2021 29 March 2021
Dowladdii markii ay burburtey waxaa uu Abkow hormuud u ahaa dadkii isboortiga soo nooleeyey wuxuuna suurtageliyey in Ciyaaraha loo adeegsado Nabadaynta Soomaaliya.
Waxa uu suurtageliyey in dib loo furo Khadkii Cagaarnaa ee kala qaybinayey Muqdisho Dagaaladii Sokeeye, waxaana Khadka ay ku fureen Isboorti iyo Banaanbax naf loo huray.
Waxaa uu ka mid ah dadkii ka qayb qaatey in Dhalinyarada Hubka laga dhigo, Hubkoodana loogu badelo Shaqo.
Mudane Abkow waxa uu door wayn ku lahaa sidoo kalana dadkii hormuudka u ahaa soo nooleeynta Waxbarashada dalka gaar ahaan midda Muqdisho isagoo ka qayb galey Furitaanka Dugsiyo ku xirmey Dagaaladii Sokeeye.
Waxa uu qayb weyn ku lahaa guddi loogu magacdaray culeys saarka si Qabqablayaashii dagaalka ay ugu cadaadiyaan in ay ka qayb qaataan Shirarka dib u heshiisiinta ee lagu dhisayay dowladdii KMG ahay ee Soomaaliya.
Waxa uu ka mid ahaa dadkii qaybta weyn ka qaatey qaybsoomidda Shirkii Carta. ee nabadaynta iyo dowlad dhisida Somalia.
Sidoo kale waxa uu ka qayb qaatay Joojinta dagaalo ka dhacay dalka gaar ahaan Magaalada Muqdisho iyadoo kooxihii iyo Beelihii dagaalamayey ay dhex dhigaan Xabad Joojinta.
Mudane C/qaadir Abkow waxa uu ka mid ahaa dadkii soo nooleyey Cayaarihii Gobolada iyadoo Gobolada dadka daggan isku socon karin, waxaana tartankii ugu horeeyey lagu qabtay Magaalada Garoowe.
Sidoo Abkow waxaa loo doortey Gudoomiyaha Dhaqdhaqaaqa Bulshada Rayidka iyada oo intii uu guddoomiyaha ahaa uu ka qeyb qaatay Barnaamijyo ku saabsan Nabadda dib u heshiisiinta.
Abkow waxa uu hormuud u ahaa dadkii Magaalada Muqdisho ku martiqaadey Abwaan Hadraawi oo sababey in Magaalooyin aan la tagi karin ay ku tagaan Barnaamij loogu magacdarey Socdaalkii Nabada ee Hadraawi.
Abkow waxaa uu ka qayb qaatey in Deegaano la geyn waayey Gargaar ay suurtagaliyeen in gargaar la gaarsiiyo ka dib markii si farsamo ah ula hadleen Maleeshiyaadkii isbaarada u taaley.
Wuxuu ka qayb qaatey Barnaamijkii loogu magacdarey Tabliiqii Nabadda oo bulshada Muqdisho looga wacyigelinayey Faa’iidada Nabadda.
Ugu dambeyna waxaa sanadkaan la gudoonsiiyay Abaal marinta Nabada Soomaaliya ee Cafis Award.
RW Rooble oo daah-furay Hay’ad ka shaqeyneysa Arrin muhiim u ah shacabka